အိန္ဒိယနှင့် မြန်မာရေတပ်သင်္ဘောများ ပူးတွဲ စစ်ရေးလေ့ကျင့်
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတွင် ပြုလုပ်မည့် စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေ ပါဝင်ရန်အတွက် မြန်မာရေတပ်သင်္ဘောနှစ်စီး အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
ကန့်ကွက်လာမည့်အရေး ကြိုပြင်ထားရန် ရှစ်လေးလုံးပါတီကို ကော်မရှင် သတိပေး
ပါတီမှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ကန့်ကွက်မှုများရှိလာနိုင်သည့် အမည်၊ အမှတ်တံဆိပ်နှင့် အလံဆိုင်ရာကိစ္စများကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် ရှစ်လေးလုံးပါတီခေါင်းဆောင်အချို့ မတ် ၂၆ ရက်နေ့က နေပြည်တော်ရှိ ကော်မရှင်ရုံး၌ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးကြသည်။
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး ထက်ဝက် လျှော့ချမှုကို IFC ကြိုဆို
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေးများကို လက်ရှိ ကျပ် ၅၀၀,၀၀၀ မှ ဧပြီ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး ကျပ် ၂၅၀,၀၀၀ သို့ လျှော့ချ သတ်မှတ်မည့်အစီအစဉ်ကို ကမ္ဘာ့ဘဏ်အုပ်စု အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည့် နိုင်ငံတကာ ဘဏ္ဍာရေး ကော်ပိုရေးရှင်း (IFC) က ကြိုဆိုလိုက်သည်။ ထိုသို့ လျှော့ချသတ်မှတ်မည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို.
ရန်ကုန်-ဖူးခက် တိုက်ရိုက်ခရီးစဉ်ကို MNA စတင်ပြေးဆွဲ
ရန်ကုန်မှ ထိုင်းနိုင်ငံ ဖူးခတ်သို့ တိုက်ရိုက်ခရီးစဉ်ကို မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်း (MNA) က မတ် ၂၅ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ် ပြေးဆွဲနေပြီဖြစ်သည်။ အပန်းဖြေစခန်းများနှင့် ကမ်းခြေများကြောင့် ထင်ရှားသည့် ဖူးခတ်သို့ ပြေးဆွဲမည့် အဆိုပါခရီးစဉ်တွင် ခရီးသည် ၁၀၀ လိုက်ပါစီးနင်းနိုင်မည့် Embraer E190 နှင့်.
နည်းပညာအခြေပြု အငှားယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်သည့် Uber က ၎င်း၏ အရှေ့တောင်အာရှလုပ်ငန်းကို ပြိုင်ဘက်ဖြစ်သည့် Grab ထံ ရောင်းချရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ဟု အေအက်ဖ်ပီက ရေးသားထားသည်။ စင်ကာပူအခြေစိုက် Grab က အမေရိကန်အခြေစိုက် Uber ၏ ဒေသတွင်း လုပ်ငန်းများကို လွှဲပြောင်း ရယူသွားမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် Uber.
သမ္မတသစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲကို မတ် ၂၈ ရက်နေ့ ကျင်းပမည်
လစ်လပ်နေသည့် သမ္မတနေရာအတွက် သမ္မတသစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲကို မတ် ၂၈ ရက်နေ့၊ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ကျင်းပမည်ဟု ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ကြေညာသည်။
ရနောင်းလူသတ်မှုက ဒုတိယမြောက် လိပ်ကျွန်းအမှု ဖြစ်လာဦးမှာလား
လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှုမှာ အငြင်းပွားစရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားနှစ်ဦးကို သေဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သလိုပဲ ရနောင်းလူသတ်မှုမှာလည်း ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ မြန်မာတွေ အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ် ကျခံသွားရမှာကို ရှေ့နေတွေက ပူပန်နေကြပါတယ်
Mytel ၏ ကွန်ယက်ချဲ့ထွင်မှုအား လာမည့်လ၌ အပြီးသတ် အကောင်ထည်ဖော်မည်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စတုတ္ထမြောက် ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာဖြစ်သည့် Mytel က ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသ ၁၅ ခုတွင် ကွန်ယက်ချဲ့ထွင်မည့် အစီအစဉ်အား လာမည့်လတွင် အပြီးသတ် အကောင်ထည်ဖော်သွားမည်ဟု ပြောကြားသည်။ လက်ရှိတွင် Mytel က နေပြည်တော်၊ ပဲခူးတိုင်း အရှေ့ပိုင်းနှင့် ကရင်ပြည်နယ်တို့တွင် မတ် ၁၅ ရက်နေ့မှစတင်ပြီး.
ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ဦးဝင်းမြင့်ကို ရွေးချယ်၊ သမ္မတဖြစ်ရေး ပိုမို ခိုင်မာလာ
အာဏာရပါတီဟောင်းဖြစ်တဲ့ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (USDP)က ပျော်ဘွယ်အမတ် ဦးသောင်းအေးကို သူနဲ့အပြိုင် အမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့ပေမယ့် ဦးဝင်းမြင့်က ထောက်ခံမဲ ၂၄၆ မဲအသာနဲ့ အနိုင်ရသွားပါတယ်